KANDIDA AN’NY FIFIDIANANA HO FILOHA 2018 : Ny fandriampahalemana sy ny angovo no laharam-pahamehin’i Dr Jules Etienne | Madatopinfo
KANDIDA AN’NY FIFIDIANANA HO FILOHA 2018 : Ny fandriampahalemana sy ny angovo no laharam-pahamehin’i Dr Jules Etienne
Fantatry ny Dokotera Jules Etienne Rolland ny mampiakaikaika ny vahoaka, dia ny tsy fandriam-pahalemana izany. Ny tetika hanafohanana ny ny asan-jiolahy sy ny dahalo amin’ny alalan’ny fanomezana tambin-karama ambony ny Filoham-pokonolona no ezaka hataony raha nilaza ny fanambin’izy teo ampanambarana ampahibemaso, ny Alakamisy 5 Aprily 2018, teny amin’ny Hotely Panorama fa anisan’ny mpirotsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena. Ho fanatanterahana izany dia novakiany batsilana fa ahena ireo tetibola be loatra ao amin’ny Prezidansa. “Tsy filoham-pokontany no iantsoana ireo tomponandraikitra any ifotony amin’ny Fitsinjaram-pahefana fa Filoham-pokonolona”, io no hevi-baovao entin’ity raim-pianakaviana ity mahakasika ny fitsinjovana ny vahoaka. Rehefa mahazo tambin-karama ireo mpiandraikitra any ifotony dia vonona hiezaka hiady amin’ny malaso izy ireo. Rehefa milamina ny tantsaha dia azo antoka ny famokarana, ny fiompiana sy ny fambolena. Ankoatra izay dia nasongadiny ihany koa ny fampidinana ny vidin-tsolika amin’ny famerenana ny fanadiovana solintany na “raffinerie”. eto Madagasikara, na solika tsy voadio izay afarana avy any ivelany na ny vokarina avy eto an-toerana, ao Bemolanga izany. Rehefa midina tokoa ny vidin-tsolika, midina ny fitanterana sy ny herinaratra ka azo antoka ny hahamora ny vidim-piainana. Amin’izay fotoana izay dia tsy ho latsaky ny 1dolara isan’andro intsony no mba ohanin’ny Malagasy.
Ny fanomezana hasina ny maha-firenena demokratika izay mizaka ny zo repoblikanina an’ny Madagasikara no vain-dohandraharahan’ny Antoko izay tarin’ny Filohany Dr Jules Etienne. Omen-danja vokatr’izany ny fahafahana miteny sy maneho hevitra, indrindra ny fahazoana sy ny famezivezena ny vaovao. Ny fampiharana ny Demokrasia izay mankato ny vahoaka feno fahefana no kendren’ny fitondran’ity mpitsabo ity raha mandresy izy amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Masi-mandidy amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena ; ary manaja ny zon’olombelona ny vahoaka eto Madagasikara. Anisan’ny iadiana amin’ny fahantrana izay mianjady amin’ny 70% an’ny vahoaka Malagasy ny fahavitan-tena ara-tsakafo amin’ny alalan’ny fampiasana fitaovam-pamokarana sy teknolojia vaovao, eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ny hazan-dranomasina, ny harena ankibon’ny tany, ny fizahan-tany ary ny indostria no heverin’ity raimpianakaviana manan-janaka telo lahy ity fa antoky ny fampivoaharana sy fampandrosoana ny toe-karena Malagasy.
Fanofanana sy fifanomezana anjara masoandro an’ireo tanora sy ny vehivavy amin’ny fitantanana ny fiharian-karena no anisan’ny fampandrosoana ifotony kendren’ny antoko politika MaFi.Ny fitsinjovana ny lafiny ara-pahasalamana no heverin’ny Dokotera Jules Etienne fa andrandrain’ny Malagasy. Heverin’ireo mpikambana ao amin’ny antokony mantsy fa ny tena tanjona dia ny fahasambarana ho an’ny daholobe, koa amin’izany dia atsangana ny “caisse d’assurance maladie”, ho an’ny tantsaha, ny mpanao asa tanana sy ireo mpitantam-barotra. Tsy afangaro ny politika pilitisianina sy ny fitantananan ny Tanana amin’ny fitsinjaram-pahefana; ka anisan’ny tetika maty paika amin’ny fampiharana ny fahefana ny fitantanana ny faritra isany avy : “Décentralisation, Déconcentration”. Manana vina lavitra mikasika ny tontolo manodidina ny Filoha Jules Etienne ka eo ny ezaka fiarovana ny rano sy ny ala, izay ho lova ho an’ny taranaka fara mandimby sy ho antoka ho an’ny famokarana; etsy andaniny ihany koa ny tolona ho amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, ho fampiroboroboana ny toe-karena amin’ny fomba feno fanajana ny natiora sy ny soatoavina mitandro ny fahendrena Malagasy. Tsahivina moa fa ny antoko politika MaFi na Madagasikara Fivoarana dia teraka ny taona 2011 raha fikambanana mpanao asa soa ny mpiara-belona izy nanomboka ny taona 2009.